नीति नियमहरू प्रभावकारी रूपमा बनाउनुपर्छ
बिहीवार, चैत्र १९, २०७१
(नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफू गभर्नर भएसँगै घरजग्गा व्यवसायी र सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले केही अपेक्षा गरेको बताएका छन् । चैत ५ गते मात्र राष्ट्र बैंकको १६ औं गभर्नरमा नियुक्त भएका डा. नेपालले आफू निडर भएर वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा लाग्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । निवर्तमान गभर्नर युवराज खतिवडाले थालेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । प्रस्तुत छ, गभर्नर बनेकै दिन डा. नेपालसँग नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा गरिएको कुराकानी : सम्पादक)
– नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो उच्च गरिमामय पदमा भर्खरै नियुक्त हुनुभएको छ, अब तपाईंको पहिलो प्राथमिकता के हुनेछ ?
अहिलेको मुख्य समस्या भनेको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता हो । अतः वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । निजी क्षेत्र, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग मिलेर वित्तीय क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नेछु । त्यसैगरी, वित्तीय सुशासन कायम गरी वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछु । त्यस्तै, वित्तीय साक्षरता र पहुँच बढाउने र अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने काम सुरु गर्छु ।
– अधिकांश वित्तीय अपराधहरू राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग जोडिएर आउने गरेका छन् । र, यो बढी चिन्ताको विषय पनि बन्दै गएको छ । वित्तीय अपराध बढ्न नदिन के–कस्ता कार्यहरू गर्नुहुन्छ ?
वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा के–कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले नै यो यो गर्छु भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । जुनसुकै किसिमबाट हुने वित्तीय अपराध रोक्न म निडर भएर लाग्नेछु । वित्तीय अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित नियम कानुनहरू बनाउने कार्य प्राथमिकतामा पर्नेछ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँछ । अर्काे कुरा वित्तीय क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास गरिएका वित्तीय प्रविधि र नयाँ कानुनहरू, सन्धि तथा अभिसन्धिलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछु । यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा निश्चय नै सुधार ल्याउनेछ । अहिले मुलुकमा लगानीकर्ताको विश्वास कम हुँदै गइरहेको छ । अब यस्तो कानुन बनाउनुप¥यो कि जुन कानुनले लगानीकर्ता विश्वस्त हुन् र लगानी भित्रियोस् ।
– अहिले पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या वित्तीय पहुँच बाहिरै छन् । वित्तीय पहुँचबाहिर रहेको त्यो जनसंख्यालाई पहुँचभित्र ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
यस विषयमा गहिरो अध्ययन र खोजबिन गर्छु । अनि आवश्यकताअनुसार अघि बढ्छु । यो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो ।
– दुर्गम क्षेत्रका जनतासम्म बैंकिङ पहुँच पु¥याउने योजना बनाउनुभएको छ ?
मेरो कार्यकालमा दुर्गम क्षेत्रका अत्यन्त गरिब जनताले पनि बैंकिङ सेवा उपयोग गर्न पाउने वातावरण तयार गर्छु । बैंकिङ साक्षरता बढाएर यस्ता नागरिकलाई बैंक आफ्नै हो, यहाँबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने मेरो लक्ष्य छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाउँ–गाउँसम्म आफ्नो सेवा पु¥याउनका लागि विशेष पहल गर्छु । गाउँमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम के हुन्छ, अध्ययन गरेर कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनेछु ।
– तपाईसँग घरजग्गा र सेयर बजारका लगानीकर्ताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्, यी क्षेत्रको सुधारका लागि के–कस्ता नीतिगत सुधार गर्नुहुन्छ ?
म गभर्नर भएसँगै घरजग्गा र सेयर बजारका लगानीकर्ताको अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन । दुवै क्षेत्रमा सुधारको जरुरी छ । केही समय अध्ययन गर्छु र उपयुक्त निर्णय लिनेछु ।
– पूर्व गभर्नरलाई तपाईले नियन्त्रणमुखी भन्दै आलोचना गर्नुहुन्थ्यो । डा. खतिवडाका पालामा जारी नीति–निर्देशनहरू उल्टिन्छन् हो ?
यसअघिका गभर्नरले धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ । उहाँले गरेका राम्रा कामलाई अझ प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिनेछु । पहिला राष्ट्र बैंक गएर काम सुरु गरौं । सरोकारवालाहरूको सुझाव लियौं । आफूले केही अध्ययन गरौं । त्यसपछि आर्थिक क्षेत्रमा असर गर्ने निर्णय भेटिए भने करेक्सन हुन्छ ।
– तपाईंसँग नियमन निकायमा बसेर काम गरेको अनुभव पनि छ । राष्ट्र बैंकमा गइसकेपछि वित्तीय क्षेत्रलाई सवल बनाउने प्राथमिकता के–के हुन् ?
पहिलो कुरा त वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व नै हो । वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिएर लैजान सक्नु नै महत्वपूर्ण हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रप्रति नेपाली जनताको विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वासलाई कायम राख्नुपर्छ । म अगाडिका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय स्थायित्व र जनताको विश्वास कायम गर्न धेरै कामहरू गर्नुभयो, यो काममा मेरो पनि निरन्तरता रहनेछ । भनेको जस्तो सजिलो छैन, अगाडि बढ्न अत्यन्तै गाह्रो छ । म पहिले पनि नियामक निकायमा बसिसकेको छु, यसले मलाई केही सहयोग गर्छ । राष्ट्र बैंक अझ ठूलो नियामक हो । त्यहाँ धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।वित्तीय क्षेत्रले लिएका जति पनि कदमहरू छन्, त्यो निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ । सरकारको आर्थिक नीतिलाई यसले सँगै अघि लैजान सक्नुपर्छ । समग्रमा अर्थतन्त्र उकास्नलाई मौद्रिक क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याउने नै मेरो प्रमुख दायित्व हुनेछ ।
– अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले स–सानो कदम चाल्दा बैंकिङ क्षेत्र अझै परिपक्व भएको छैन भन्ने देखिन्छ । यसमा तपाईका विशेष योजना के–के छन् ?
विशेष योजना भनेकै वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिने र वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता बढाउने हो । अत्यन्त निमुखा, तल्लो तहका जनतासम्मलाई वित्तीय सेवा पु¥याउने मेरो प्राथमिकता हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा वित्तीय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई नेपालमा पनि ल्याउने उद्देश्य हुनेछ । मेरो सोच छ, कमसेकम सार्क क्षेत्रमा नेपाल वित्तीय क्षेत्रको हव बनोस् । जसले गर्दा स्वच्छ, पारदर्शी वित्तीय क्षेत्र नेपालमा छ भन्ने सन्देश बाहिर जाओस् ।
– तपार्इंलाई निजी क्षेत्रमैत्री भन्छन् । निजी क्षेत्रलाई निकै माया गर्नुहुन्छ भन्नेछ । तर, हामीकहाँ निजी क्षेत्रले हाँकेका संस्थाहरूमा समस्या देखिएको छ । अब तपाईले सुधार थाल्दा वित्तीय क्षेत्रलाई अलिक कस्नुपर्ने हुनसक्छ हैन ?
हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने कसेर भन्दा पनि निजी क्षेत्रमैत्री नियम कानुनहरू बनाइदिनुपर्छ । बनेको नियम कानुनभित्र नियमन गर्नुपर्छ । कस्ने होइन कि निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाएर जानुपर्छ । जसले गर्दा उनीहरूलाई भोलि सहज होस् । गलत क्रियाकलाप गर्ने मान्छे भोलि त्यहाँ टिक्न नसकून् । राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू यो क्षेत्रमा टिक्न सकून्, त्यसले गर्दा नीति नियमहरू प्रभावकारी रूपमा बनाउनुपर्छ । नियमन र सहजकर्ताको भूमिकामा राष्ट्र बैंक हुनेछ । गलत गर्ने मान्छे त त्यसै पनि फस्छ ।
– यस अगाडिका गभर्नरले म बैंकर र गभर्नर छुट्याउँछु भनेर नीति नियम नै अगाडि बढाइसक्नुभएको छ । राष्ट्र बैंक आजका दिनसम्म पनि त्यही नीतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तपाईले पुराना नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ । पहिले त त्यहाँ गएर बुझ्नुप¥यो । बाहिर बसेर बोलेजस्तो पक्कै हुँदैन । एउटा सानो कदमले मुलुकको नीतिमा फरक पार्छ । धेरै सोचेर विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
– राष्ट्र बैंकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट धेरै ग¥यो भनेर तपाई बाहिरबस्दा प्रश्न उठाइरहनुहुन्थ्यो । अब आफंै गभर्नर भइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो चुनौती यही हुने भो नि ?
नियम कानुनहरू नयाँ बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । औपचारिक क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने पनि छ, ठूलो दायरा बनाउनलाई लगानीकर्ता र बैंकप्रतिको विश्वास पनि बढाउनुपर्नेछ । विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ, तर्साएर त हुँदैन । उनीहरूको विश्वास बढाउनुपर्छ । गलत गर्नेलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ ।
– हाम्रो वित्तीय क्षेत्रले विगत पाँच वर्षमा कि अधिक तरलता भोग्यो कि तरलता अभाव । यसले व्याज दरमा असर प¥यो । यस्तो उतारचढावलाई रोक्न सक्नुहुन्छ ?
उतारचढाव हुने अवस्था छ । त्यो रोकिने भनेको अर्थतन्त्रको विकास भएर हो । यसले धेरै सहयोग गर्छ । आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउँदै गयौं भने त्यो समस्या आफैं हराएर जान्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास बढाउन सकियो भने यो विस्तारै घट्दै जान्छ ।
– अर्थतन्त्रको चुनौती भनेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू हुन् । तपाईंलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको नेपाली कांग्रेसले त सहकारीलाई अर्थतन्त्रको बेग्लै दर्जा दिएको छैन । तपाईलाई त सजिलो छ नि ?
सहकारीलाई पनि बलियो नियमनभित्र ल्याउनै पर्छ । धेरै सहकारीलाई मर्ज गर्नुपर्छ । यसका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि हामीले कुनै कदम चाल्दा अध्ययन गरेर गर्नुपर्छ ।
आर्थिकबजार मासिकबाट साभार